पर्वत महोत्सवका आयोजकले ‘औद्योगिक व्यापार मेला तथा महोत्सव’ शव्दको वदनाम गरे ! – ebaglung.com
पर्वत महोत्सवका आयोजकले ‘औद्योगिक व्यापार मेला तथा महोत्सव’ शव्दको वदनाम गरे !
२०७३ माघ १९, बुधबार ११:१८	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
आयोजकको सम्पूर्ण ध्यान लोकदोहोरी कलाकारको स्याहार-सुसारमा केन्द्रित, लघुउद्यमी निराश !
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ माघ १९। पर्वत जिल्लामा जारी पश्चिमान्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा पाचौँ पर्वत महोत्सव सकिन अव ३ दिन मात्र बाँकी छ । आयोजकहरुले महोत्सव २ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र ४ करोडको व्यापार (कारोवार) हुने भनि गरेको प्रचार महोत्सवमा देखिएको दर्शक र लघुउद्यमीहरुको निराशाले हावादारी सावित भएको छ ।
पश्चिमान्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा पाचौँ पर्वत महोत्सव नामाकरण गरिएपनि यसले महोत्सव रुप लिन सकेन । आयोजक पक्षले मेला र महोत्सवको महत्वलाई बुझपचाएर लोकदोहोरी गायकहरुलाई बढी प्रश्रय दिएकाले महोत्सव लोकदोहोरी मेलामा परिणत गरियो भन्ने आम दर्शकहरुको भनाई सत्यताको निकट रहेको सबैको बुझाई छ ।
पश्चिामान्चल औद्योगिक मेलाको प्रचार सुनेर व्यापार व्यवसायका लागि पर्वत र बाहिरी जिल्लाहरुबाट आएका लघु उद्यमीहरुका स्टलहरुमा महोत्सव सकिनै लाग्दा व्यापार भएको छैन । लघु उद्यमी एवं व्यापारीहरु भन्छन, ‘आयोजकको सम्पूर्ण ध्यान लोकदोहोरी कलाकारहरुको स्याहार सुसार केन्द्रित छ, उनिहरु एक पटक पनि स्टलहरुमा आएर हाम्रा समस्या बुझने जमर्को सम्म गरेनन् । यिनीहरुलाई “औद्योगिक व्यापार मेला र महोत्सव” भनेको के हो भन्ने नै बोध रहेनछ ।’
उनिहरुको अनुरोध छ, ‘पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला भन्ने लोकदोहारी कलाकारलाई पोस्ने काम भयो । अब व्यापार मेला होईन, पर्वत महोत्सव होईन, ‘लोकदोहोरी मेला’ नामाकरण गरेर पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला र पर्वत महोत्सव शव्दको वदनाम गर्न दिनु भएन ।
पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा पाँचौ पर्वत महोत्सवमा व्यापार गर्नको लागि स्टल राखेर बसेका लघुउद्यमीहरु निराश छन् । महोत्सवमा लघुउद्यमीका स्थानीय लप्सीको अचार, क्याण्डी, अदुवाको क्याण्डी जुस, पाउडर, अलैची, अचार, मह लगायतका समाग्री विक्री नभएपछि निराश बनेका हुन् । मनिषा अदुवा क्याण्डी उद्योगको स्टल राखेर बसेकी तिलाहार ३ गिज्यानकी सेती महत महोत्सवमा सोचे अनुसारको विक्रि नभएको गुनासो गरिन् । उनले आफूले स्टलमा राखेको लप्सीको अचार, पाउडर, क्याण्डी, माडा, अदुवाको जुस, क्याण्डी, अल्लोका समाग्रीहरु खासै विक्रि नभएको दुखेसो गरिन । लघुउद्यम संघ पर्वतकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनले महोत्सवमा १५ वटा लघुउद्यमीको स्टल रहेको तर चित्त बुझ्दो व्यापार नभएपछी सबै निराश बनेको बताईन् ।
चिसापानी कृषि फर्म अन्तरगत कुर्घा- ६ का उमाकान्त शर्माले पनि पाँचौ पर्वत महोत्सवमा स्टल राखेका छन् । स्टलमा आफ्नै बारीमा फलाएको सुन्तला, मह, लप्सीका परिकार लगायतका स्थानीय उत्पादीत समाग्रीहरु राखेका छन् तर उनको पनि दुखेसो उही छ व्यापार भएन ।
उघुउद्यम संघको सचिव समेत रहेका उनले महोत्सवमा स्टल राखेर सोच अनुसारको व्यापार हुन नसकेको बताए । दर्शकको अभाव भन्दा पनि उघुउद्यमको प्रचारप्रसारको कमी भएकोले पनि यस्तो भएको उनको तर्क छ ।
महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनलाई आयोजकले प्रथामिकतामा नराखेको समेत उनले आरोप लगाए । लघुउद्यमी भनेको छ तर प्रथामिकतामा विदेशी समाग्री परेको छ, कसरी स्थानीय उत्पादनको व्यापार हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो । उनले ३५ घार मौरी पालेका छन् भने २ सय बोट सुन्तला लगाएका छन् । बार्षिक रुपमा ५ लाख सम्म कमाउने गरेको उनी बताउँछन् तर महोत्सव भने उघुउद्यमी प्रथाकितामा नपरेको बताए ।
झात्री सल्ला लप्सी खाद्य उद्योग दुर्लुङका सागर शर्माको पनि व्यथा उही छ। व्यापार भएन । लप्सीका परिकार राखेर बसेका उनले सोच अनुसारको व्यापार नभएको बताए ।
त्यस्तै हलहलेका ओम बहादुर रोकाले पनि आफूले उत्पादन गरेको भूइस्याउले खासै महोत्सवमा व्यपार नपाएको बताए । मुल गेटको पहिलो स्टलमा बसेका उनले भूइस्याउलाई महोत्सवमा आउनेहरु सखरखण्ड भन्ने गरेको बताए । लघु उद्यमीको भन्दा अन्य सरसामानका स्टलहरुको पनि व्यथा कम मार्मिक छैन । जिल्ला भित्र र बाहिर देखी व्यापारका लागी ढुवानी गरेर ल्याएका सामाग्री कसरी फर्काएर लाने भन्ने पिरलोले मलिन छन् ।
मगर दिवसमा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रमवीच उपराष्ट्रपति पुनलाई अभिनन्दन गरिने !